မင်းခိုက်စိုးစန် | Sanchaung Journal
Tag Archives: မင်းခိုက်စိုးစန်
ဘ၀မှာ ဘာတွေကို တည်ဆောက်နေခဲ့ကြပါလိမ့်.
December 19, 2008 freebird	1 Comment
ဖိုးသူတော်ပြောပြတဲ့ ပုံပြင် (၂)
သိပ္ပံပညာရှင်ကြီး သုံးယောက်ဟာ အိမ်တစ်အိမ်ထဲမှာ အတူတူ စုပေါင်း နေထိုင်ခဲ့ကြတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ခက်တာက သူ့တို့နေတဲ့ အိမ်မှာ ချက်ပြုတ်စားသောက်ဖို့ မီးဖို တစ်လုံးမှ မရှိဘူး။ ဒါကြောင့် သိပ္ပံ ပညာရှင်ကြီးတွေဟာ ထမင်းစားချိန်ကျရင် ဟိုအိမ် ဒီအိမ်သွားပြီး ထမင်းနည်းနည်း ဟင်းနည်းနည်း လိုက်တောင်းစားရတယ်ဆိုပဲ။
တစ်နေ့လည်းမဟုတ်၊ နှစ်နေ့လည်းမဟုတ်၊ နေ့တိုင်းနေ့တိုင်း၊ မနက်စာတောင်းလိုက်၊ ညစာတောင်းလိုက်နဲ့ ဆိုတော့ပေးရတဲ့ အိမ်တွေကလည်း ငြိုငြင်လာတယ်။
“ခင်ဗျားတို့ကလည်းဗျာ။ တစ်သတ်လုံး ဒီလိုချည်းပဲ တောင်းစားနေတော့မှာလား။ ကိုယ့်ဘာသာကိုယ်လည်း ချက်စားကြဦးမှပေါ့” လူတွေကပြောကြတဲ့အခါ
သိပ္ပံပညာရှင်တွေက “ချက်တော့ စားချင်ပါတယ်ဗျာ။ ဒါပေမယ့် မီးဖိုချောင်မရှိလို့ပါ”
“မီးဖိုမရှိရင် ၀ယ်ပေါ့ဗျာ။ ဒါမှမဟုတ်။ ခင်ဗျားတို့လည်း သိပ္ပံပညာရှင်တွေပဲ..ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် မီးဖိုလေးတစ်လုံးလောက် ဖြစ်အောင် မလုပ်တတ်ကြဘူးလား” လူတွေကအကြံပေးကြသတဲ့
ဒီလိုအပြောခံရတော့ သိပ္ပံပညာရှင် သုံးယောက်ဟာ လေးလေးနက်နက် စဉ်းစားကြပြီ…
“ငါတို့အိမ်မှာ မီးဖိုတစ်လုံးတော့ ရှိဖို့လိုပြီ” လို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။
Continue reading ဘ၀မှာ ဘာတွေကို တည်ဆောက်နေခဲ့ကြပါလိမ့်. →
ဖိုးသူတော် ပြောသော ပုံပြင်(၁)
February 28, 2008 freebird	1 Comment
၀က်ဝံကြီးတစ်ကောင်ဟာ လက်ပတ်နာရီလိုချင်တာနဲ့ မြို့မှာ သွားဝယ်ဖို့ဆိုပြီး ခရီးထွက်လာခဲ့သတဲ့။ သူ လက်ပတ်နာရီ လိုချင်နေတာ ကြာပြီ၊ မြို့ကို ရောက်ဖူးချင်နေတာလည်း ကြာပြီ။မြို့ကိုရောက်ရင် ကြိုးသိုင်းခေါင်းစွပ်ပါတဲ့ တီရှပ်တစ်ထည်ဝယ်မယ်။
ပြီးရင် ကာကီရောင်ဖျော့ဖျော့ ဂျီယော်ဒါနို ဘောင်ဘီရှည်ပါဝယ်ပြီး ၀တ်ဦးမှပဲ… လို့ဝက်ဝံကြီးက စိတ်ကူးယဉ်သတဲ့။ပြီးမှ မြို့သားတွေရဲ့ စတိုင်အတိုင်း ဆယ်လူလာဖုန်းတစ်လုံး ခါးမှာ ချိတ်ပြီး မြို့ထဲလျှောက်လည်ရင်း နာရီရှာဝယ်မယ်လို့ ၀က်ဝံကြီးက တွေးလိုက်တယ်။သူလိုချင်တဲ့ နာရီက ဒိုင်ခွက် အချိန်ပြဂဏန်းတွေ နေရာမှာ စိန်ပွင့်သေးသေးလေးတွေ မြှုပ်ထားပြီး ပတ်ပတ်လည်မှာ သလင်းကျောက်တွေ စီထားတဲ့ ဒီဇိုင်မျိုး။
ပုံစံလှလှပေါ့။ နာရီက ရွှေရောင်ဖြစ်ရမယ်။ ကြိုးက သားရေကြိုးပျော့အနက်ရောင်ဖြစ်ရမယ်တဲ့။
“နှစ်ပေါင်းတစ်ရာမှာ စက္ကန့်ပိုင်းလောက်ပဲ အချိန်အတိမ်းအစောင်း အလွဲအမှား ရှိရမယ်” လို့ ကြော်ငြာထားတဲ့ ရိုးလက်(စ်) နာရီကို ၀က်ဝံကြီးက သိပ်စိတ်ဝင်စားတာပဲတဲ့..။
“ဘ၀မှာ အချိန်ဆိုတာ သိပ်အရေးကြီးတယ်” လို့ ၀က်ဝံကြီးက သူ့ဘာသာသူ တစ်ယောက်တည်း ပြောလိုက်တယ်။ ဒီစကားဟာ ၀က်ဝံကြီး တစ်သတ်လုံး ပြောပြောလာခဲ့တဲ့ သူ့ရဲ့ ခံယူချက်လည်း ဖြစ်တယ်ဆိုပဲ။
ဒီလိုနဲ့ ၀က်ဝံကြီးဟာ တရွေ့ရွေ့လျှောက်ရင်း တောအုပ်ကြီးရဲ့ အပြင်ဘက်ကို ရောက်လာပါလေရော။ တောအုပ်က ထွက်ပြီဆိုတော့ ရွာနဲ့ နီးလာတာပေါ့။
ရွာနားရောက်တော့ ရွာခြံစည်းရိုး အပြင်ဘက်မှာ ပြောင်းခင်းကြီး တစ်ခင်းကို တွေ့ရတယ်။ ပြောင်းခင်းကြီးက အကျယ်ကြီး၊ မိုးကုပ်စက်ဝိုင်းထိအောင် ကျယ်သလားမှတ်ရတယ်။ မျက်စိတစ်ဆုံးပဲ..တဲ့။
ပြောင်းဖူးတွေကလည်း စားချင်စဖွယ်၊ ပြွတ်သိပ်.. လို့။
“အင်း.. ပြောင်းဖူးတွေက အင်မတန်အရသာ ရှိမယ့်ပုံပဲ။ ငါသွားရမယ့် ခရီးကလည်း ဝေးသေးတယ်။ အဲဒီတော့ လမ်းမှာ စားဖို့ နည်းနည်းပါးပါး ခူးသွားဦးမှပဲ” ဒါနဲ့ပဲ.. ၀က်ဝံကြီးဟာ ပြောင်းခင်းထဲကို တိုးဝင်သွားတယ်။ ပြီးတော့ အကြီးဆုံး အကောင်းဆိုးလို့ ထင်ရတဲ့ ပြောင်းဖူး နှစ်ဖူးကို ရှာပြီး ခူးလိုက်တယ်။
ဒါပေမယ့်.. ရှေ့မှာ အဲဒီထက် ပိုကြီးပြီး ပိုကောင်းတယ်လို့ အောက်မေ့ရတဲ့ ပြောင်းဖူးတွေကလည်း တစ်သီတစ်သန်းကြီး ရှိနေသေးတာ။ ဒါနဲ့ ၀က်ဝံကြီးဟာ ထပ်ပြီးလိုချင်လာပြန်ရော။ ခက်တာက သူ့လက်နှစ်ဖက်မှာ ခူးပြီးသား ပြောင်းဖူးနှစ်ဖူးကို ကိုင်ထားရတော့ လက်မအားတော့ဘူး။
ဒါနဲက.. ၊ ၀က်ဝံကြီးဟာ လက်ထဲက ပြောင်းဖူးနှစ်ဖူးကို ချိုင်းကြားထဲမှာ ညှပ်ထားလိုက်တယ်။ ပြီးတော့ ရှေံကို တိုးတိုးသွားရင်း တွေဲတဲ့ ပြောင်းဖူးတွေကို လက်နှစ်ဖက် ဆန့်ထုတ်ပြီး ခူးပြန်သတဲ့။ အဲသည်လို.. နောက်ထပ် ပြောင်းဖူးတွေချိုးဖို့ လက်ဆန့်လိုက်တဲ့အခါ ချိုင်းကြားထဲက ပြောင်းဖူးနှစ်ဖူးက ထွက်ကျသွားတာပေါ့။
၀က်ဝံကြီးကတော့ မသိရှာဘူး။ ပြောင်းဖူးနှစ်ဖူးကို လှမ်းခူးပြီး ချိုင်းကြားထဲ ညှပ်ထားလိုက်..၊ နောက်ထပ် ပြောင်းဖူးတွေ ထပ်ခူးဖို့ လက်ဆန့်တဲ့အခါ ချိုင်းကြားထဲ ပြောင်းဖူးတွေက ထွက်ကျသွားလိုက်…။
နောက်နှစ်ပေါင်းများစွာ ကြာတော့မှ ၀က်ဝံကြီဟာ ပြောင်းခင်းကြီးထဲက ပြန်ထွက်လာခဲ့တော့တယ်။ သူ့ချိုင်းကြားမှာတော့ ပြောင်းဖူးလေး နှစ်ဖူးပဲ ပါလာခဲ့ပါသတဲ့။
သူဟာ သိပ်ကို အိုမင်းသွားပါပြီ။ မြို့ကို သွားဖို့ အချိန်လည်း မရှိတော့ပါဘူး။
သူလိုချင်လွန်းလှတဲ့ နာရီကိုလည်း မ၀ယ်နိုင်တော့ပါဘူး။
“ဘ၀မှာ အချိန်ဆိုတာ သိပ်အရေးကြီးတယ်” လို့ တတွတ်တွတ် ရေရွတ်ရင်းနဲ့ပဲ သူလာခဲ့ရာ တောအုပ်ဆီ တရွေ့ရွေ့ ပြန်ဝင်သွားရပါသတဲ့။
ဒီပုံပြင်လေးကို နားထောင်ပြီး ကျွန်တော်တွေးမိတာတွေ အများကြီးပါပဲ။
ကျွန်တော်တို့ဟာ အချိန်တွေကို ဘယ်လို ကုန်လွန်စေခဲ့သလဲ။ အဲ့ဒီကုန်ခဲ့တဲ့ အချိန်တွေအတွက်
နောက်တစ်နေ့ မနက်အိပ်ရာထတဲ့ အခါကျတော့ ကျွန်တော့ ခုတင်ဘေးမှာ လူတစ်ယောက်၊ ထိုင်နေတာကို တွေရတယ်။
အံ့သြဖို့ကောင်းတာက အဲဒီလူဟာ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ပါပဲ။
ချိုင်းကြားမှာ ပြောင်းဖူးနှစ်ဖူး ညှပ်လို့…..။
ဖိုးသူတော် ပြောသော ပုံပြင်